CAPITOL HILL MEMES: အင်တာနက်ဟာပြီးခဲ့သည့်ညကဖြစ်ရပ်များကိုတုံ့ပြန်ပုံဖြစ်သည် - သတင်း
မနေ့က Trump ထောက်ခံသူများ 2020 ရွေးကောက်ပွဲ၏ရလဒ်ဆန္ဒပြရန် Capitol Hill မုန်တိုင်းမြင်တော်မူ၏။ အဓိကရုဏ်းတွင်လူ (၄) ဦး သေဆုံးပြီး (၂၅) ကြိမ်မြောက်ပြင်ဆင်ချက်ကို Mike Pence အားတောင်းဆိုရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ပရမ်းပတာအပေါ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြသည့်လူများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အလွန်အမင်းစီးနင်းခြင်းခံစားမှုသည်နွေရာသီတွင် BLM ၏ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုများတွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့်ရဲများကိုအဖြူရောင်အကြမ်းဖက်သူများအားရဲများမှဆက်ဆံခဲ့သည့်နည်းလမ်းများအပေါ်ဒေါသတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်လူတွေဟာတွစ်တာကို ၀ င်ပြီးဝိုင်းရံထားတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးမှတ်ချက်တွေပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာသင်္ချိုင်းတွင်းနှင့်လေးနက်သောနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်သည်ဟုငြင်းဆိုခြင်းမရှိပါ။ သို့သော်လူများသည်သူတို့ရှေ့မှောက်၌မြင်နေရသည့်ပရမ်းပတာဖြစ်ရပ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ပြေလည်မှုရရှိစေရေးအတွက်အချက်များပြုလုပ်ကြသည်။
ဤရွေ့ကားမနေ့က Capitol Hill မှာအခွအေနေအကျဉ်းချုပ်သောရယ်စရာအကောင်းဆုံး 31 မှတ်စုများ:
ဒါက fuck ဆိုတဲ့ပါလီမန်အဆောက်အရဲရဲ rn တူအရာဖြစ်တယ်။ SMFH pic.twitter.com/nQYAcDtkgo
- Johnny SIBILLY (@JohnnySibilly) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
၂။ ဒီနှစ်မှာ Ryan Murphy ကဒါရိုက်တာလား။
ဤသည်မှာ American Horror Story: Cult အားအမှန်တကယ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်
- jack rem x (@jackremmington) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
- Matt (@ matt_bcfc4) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
4. ယောက်ျားတွေလာ, တစ်စက္ကန့်စဉ်းစားပါ
ရှေးရှေးဒီ asshole ရဲ့နာမကိုအမှီ Vett Getty ဖြစ်ပါတယ်ထင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျော်ဆုံးရှုံး pic.twitter.com/A2e6rmroGD
- Nerd Girl Says (@Rachael_Conrad) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
- ခရစ်စတိန်း (@chrissteinplays) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ တွင်လူများသည် Broadway ၌ယင်း၏ဂီတဗားရှင်းကိုကြည့်ရှုရန်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
- ဟယ်လင်ကင်းစတွန် (@kingstonwrites) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
2021 ခုနှစ်တွင် 7. အဘယ်သူမျှမအနုတ်လက္ခဏာ Vibe
ယနေ့တံပိုးမှ pence pic.twitter.com/VNxLd5Q2NH
- မက်ဒလင်း (@maduhlinegp) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
၈။ Jason Derulo မဟုတ်ပါဘူး။
Jason Derulo သည်ပါလီမန်အဆောက်အအုံတွင်ကျဆုံးခဲ့သည် pic.twitter.com/iQJyfL6oba
- + ☆ saddest angel ☆ + (@ th3saddestangel) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
ကျွန်တော့်ကိုလှူဒါန်းမှုကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ပြောင်းပေးတဲ့ပါလီမန်အဆောက်အ ဦး မှာကျွန်တော့် pic.twitter.com/AOi2V3XtxQ
- JohnDough (@KingBAZIP) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
ဒီနည်းကိုတစ်ခုကတိုးတက်နေတဲ့စနစ်နှင့်အတူသူငယ်များအဘို့။ အအေးပေးစနစ်နှင့်အတူ TOP ချ A / C ။ pic.twitter.com/IInGlaJeZR
- bri (@bigshitxtalker) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
ဘီဘီစီသတင်းစာဖတ်သူသည်ယခုပင်သူ၏စာတမ်းများကိုငုံ့ကြည့်ပြီး 'သတင်းတွေအများကြီးရှိတယ်' ဟုပြောသောအခါကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။
- Noreen Masud (@NoreenMasud) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
12. Pls, သင့်ရဲ့ကုထုံးကိုကြည့်ပါ
အမျိုးသားများသည်ကုထုံးကိုသွားမည့်အစားစာသင်ခန်းကို ၀ င်တိုက်လိမ့်မည်
- Ruby Giuliani (@ gokuw33dlord) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
တောင်းပန်ပါတယ် pal, အဘယ်သူမျှမ stag dos ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ သငျသညျလမ်းကိုဆင်း Wetherspoons ကိုသွားရပါလိမ့်မယ်။ pic.twitter.com/dZzwpLbRTh
- Gwdihŵ🦉 (@youwouldknow) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
၁၅ နှစ်အရွယ်မှာကျွန်တော့်သားများအမေရိကန်သမိုင်းအတန်းနောက်မှာထိုင်ပြီးကလေးတွေကိုအမှန်တရားကိုပြောဖို့သေချာအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ pic.twitter.com/uV7GM0GBOV
- daria morgendorffer (@_teeeemula) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
ငါ CNN သို့မဟုတ် Black Mirror ကိုကြည့်နေပါတယ်
- Eve ၀ (@_evebennett) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
nope (@LilNasX) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
…။ Walmart သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည် https://t.co/829a8aYjdr
- ကျွန်ုပ်သည်ပါးစပ်အလွန်ကြီးပြီးကျွန်ုပ်နှင့်စကားများစွာပြောပါ (@yagirltoomuch) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
၁၉။ Demi ယခုကြှနျုပျတို့ညှိရန်မလိုအပ်ပါ
ဒုတိယနှစ်ဝက်ဖတ်တယ် https://t.co/f4bmUWjS1y pic.twitter.com/hk8gIWaaMG
- jack rem x (@jackremmington) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
- အိုင်ယာလန် Simpsons ပရိသတ်များ (@iresimpsonsfans) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
၂၁။ TikTok သည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကသတင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်
tik tok မှတစ်ဆင့်ပါလီမန်အဆောက်အအုံအဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်သိသောအချက်သည်…။ pic.twitter.com/7wUAYewroq
- Hood Vogue သည်ဆင်းရဲမှုကိုငြီးငွေ့နေသည် (@itskeyon) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
22. ချစ်ခင်ရပါသောစာဖတ်သူ, သူတို့မှားခဲ့ကြသည်
- eleanor (@snitchery) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
မိန်းကလေးများ FIGHTINGGGG ဖြစ်ကြသည် https://t.co/ai9cxyWpfB
- နိုင်းလ် (@storyteIIers) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
- TINASHE (@Tinashe) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
ပြည်တွင်းစစ်စတင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ ၁၂ နာရီပိတ်ပင်ထားသည်
- ကျွန်ုပ်၏ဒက်ဘစ်ကဒ် (အစားအစာထရပ်ကား) သည်မောင်းလာသည် (@fart) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
ကျွန်တော့်ကလေးတွေကို Jamiroquai လို့ပြောလိုက်ပါ။ pic.twitter.com/bwcYA7k5l9
- Bathrobe (@albornoz_mx) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
- ယေရမိ (@GBEJinero) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
28. အဘယ်သူမျှမထိတ်လန့်, Demi ရဲ့ဖုံးလွှမ်းတယ်
Demi Lovato ဟာစတူဒီယိုထဲမှာနေတယ်
- Bolu Babalola (@BeeBabs) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
- နီကိုးလ် (@urbanicole) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
အတားအဆီးအဖြစ်အသုံးပြု Jo ရဲ့တစ်သင်းလုံးကကစားသမားဂါဝန်ခါးပတ်နှင့်အတူကျောက်စိမ်း, Jo နှင့် Danielle ရဲ့ lair https://t.co/hDRSH4ufna pic.twitter.com/h4hPN86eoi
- jb (@ burgey_96) ဇန်နဝါရီလ 7, 2021
။ @realDonaldTrump မင်းအိမ်ထောင်ဖက်ကိုတက် fucked
- လူစီယာကက်စ်ကင် (@chiwithaC) 2021 ဇန်နဝါရီလ 6,
တည်းဖြတ်မှုမတိုင်မီအထူးပုံရိပ်ခရက်ဒစ်: Jon Sailer အပေါ် ရေဖြန်း